Nagu saabsan - Shenzhen Herbin Ice Systems Co., Ltd.
Shenzhen Herbin Ice Systems Co., Ltd. waxaa laga helay 2006. Waxay diiradda saareysay hagaajinta tiknoolajiyada mashiinka barafka xitaa tan iyo, oo ay ku jiraan mashiinka barafka flake, mashiinka barafka tuubada, mashiinka barafka barafka iyo wixii la mid ah.
Tikniyoolajiyadda mashiinka barafka:
Dhanka kale, shirkadda Herbin waxay bilawday adeegsiga dawada qalinka ee Chromed si ay u samayso uumi bixiye ilaa iyo sanadkii 2009 si loo hagaajiyo kulaylka barafka kuleylka kuleylka. Nooca noocan ah ee loo yaqaan 'alloy alloy' waa shay aad u gaar ah, oo ay leeyihiin shirkadda Herbin Ice Systems. Qalabka cusub wuxuu hagaajiyay kuleylka kuleylka 40% marka la barbardhigo mashiinnada kale ee barafka Shiinaha, waxayna ka hortageysaa cillad ka dib isticmaalka muddada dheer.
Tiknoolajiyada mashiinka barafka:
Nidaamyada barafka ee Herbin waxay bilaabeen inay khibrad ka bartaan mashiinka barafka ee Vogt ilaa 2009.
Waxaan ka iibsanay xoogaa la isticmaalay P34AL bishii Luulyo 20, 2009 laga soo iibiyay warshadda Xiaobang Ice (Warshadda ugu weyn ee barafka ee Shenzhen). Waxaan kala goynay mashiinada barafka tuubada, waxaanan soo guuriney mid kasta oo ka mid ah qaybaha, sida agaasimaha socodka biyaha, dareeraha heerka dareeraha ee uumiyaha, nidaamka wareejinta saliida kombaresarada, nidaamka dareeraha caqliga badan, furayaasha cadaadiska joogtada ah, nidaamka kala bixida wax ku oolka ah iyo wax walba.
Iyada oo ku saleysan khibrada Vogt, waxaan bilownay tijaabinta iyo hagaajinta mashiinka barafka tuubbada ee 2010.
Waxaan noqonay soo saaraha mashiinka barafka tuubada ugu fiican dalka Shiinaha sanadkii 2011.
Tiknoolajiyada sare, tayada sare iyo qiimaha wanaagsan ayaa ka dhigaya shirkadda Herbin inay si dhakhso leh ugu koraan suuqa mashiinka barafka tuubada.
Ka jooji tikniyoolajiyadda mashiinka barafka:
Kahor 2009, waxaan diirada saareynaa mashiinka barafka barafka dhaqameed.
Waxaan bilownay sameynta mashiinka barafka qaboojiyaha tooska ah tan iyo 2010.
Mashiinkaan barafka ah ee tikniyoolajiyadda cusubi waa keydinta tamarta, xasilloon.
Dhanka kale, waxaan bixinaa mashiinno baraf wanaagsan, qolal baraf ah, qolal qabow, biyo qaboojiyeyaal, nidaamyo biyo saafi ah, shandadaha bacda, mashiinada barafka sameeya, qaboojiyeyaal faaruq ah iyo wixii la mid ah, Aad ayaanna ugu fiicanahay taas.
(1) Qiimaha aasaasiga ah ee HERBIN: Abuur qiime u yeelo macaamiisha isla markaana u abuura waxtarro bulshada!
(2) HERBIN waxay u hogaansan tahay falsafada ganacsiga ee "Tayada marka hore, Magaca koowaad marka hore, Adeegga ugu horeeya", waxay sii wadi doontaa hal-abuurnimada iyo horumarinta, waxay ku dadaalaysaa inay hagaajiso tartamada caalamiga ah ee qalabka sameynta barafka, oo ay noqoto sumad heer caalami ah oo sameynta barafka. .
Dhammaan mashiinnada barafka waxaa si gaar ah loogu talagalay inay noqdaan kuwo aad u xoog badan, sidaa darteed si wanaagsan ayey ugu noolaan karaan inta lagu guda jiro keenista laga soo qaado warshaddeena xarunta macaamiisha. Ma jiro tuubbo jabaysa, dildilaaca meelaha alxanka, ma furfurayo qaybo ka dib maraakiibta caalamiga ah ee cakiran iyo gaadiidka waddooyinka.
Dhamaan mashiinada barafka waxay dhaafi doonaan tijaabada 72 saac kahor intaan loo gudbin macaamiisha.
Herbin waxay bixisaa dammaanad ah 24 bilood dhammaan mashiinnada barafka.
Waxaan sidoo kale leenahay koox shaqaale ah oo iibinta iibka kadib ah oo ka caawisa dadka isticmaala rakibida mashiinada barafka. Adeegga latalinta khadka tooska ah waa bilaash wiishka dheer.
Dadka ku nool Herbin Ice Systems:
(1) Herbin aasaasihii shirkadda, wuxuuna ku magacaabay magaciisa shirkadda. Herbin hadda waa maareeyaha guud ee shirkadda wuxuuna howl galiyaa shaqada ugu weyn ee shirkadda ee ku saabsan wax soo saarka.
(2) Mike Li waa Agaasimaha Iibka, oo mas'uul ka ah iibinta shirkadda ee labada Shiinaha iyo suuqyada dibaddaba. Mike wuxuu khibrad u leeyahay iibinta wax soo saarka mashiinka barafka muddo ka badan 10 sano, ka hor intaasna wuxuu ka qaatay shahaadada qalin-jabinta ee HAVC Major Jaamacadda Zhanjiang Ocean University.
Jaamacadda Zhangjiang Ocean waxay caan ku tahay HAVC Major oo ku taal Koonfurta Shiinaha.
Shahaadada mashiinada barafka ee Herbin.
Dhamaan mashiinada barafka ee Herbin waxay leeyihiin shahaadada CE, SGS, UL ......
Mashiinka barafka ee Herbin wuxuu leeyahay in kabadan 70 rukhsad gaar ah, sida patent-ka qalabka cusub ee uumeeyaha barafka, daadinta mashiinka barafka flake, mashiinada barafka tubbada iyo wixii la mid ah.
Qaab dhismeedka shirkadda:
(1) Waaxyaha HERBIN waxaa kamid ah: Waaxda Horumarinta, Waaxda Iibsiga, Waaxda Waxsoosaarka, Waaxda Tayada, Waaxda Ganacsiga, iyo Waaxda Adeegyada Iibinta Kadib
(2) Waaxda Horumarinta: Waxay masuul ka tahay hagaajinta tayada mashiinka barafka, hagaajinta teknolojiyada barafka, horumarinta keydinta awooda iyo wixii la mid ah;
Waaxda Iibsashada: Soo iibinta qalabyada la xiriira iyo qalabyada loogu talagalay mashiinnada barafka, sida kombaresarada, maraakiibta cadaadiska, furayaasha balaadhinta, kondenser, iwm.
Waaxda Warshadaha: Waxay mas'uul ka tahay soo saarista mashiinnada barafka iyo qalabka la xiriira.
Waaxda Tayada: Hubi tayada mashiinada barafka. Iyo in lala socdo isticmaalka korontada ee mishiin kasta.
Waaxda Ganacsiga: Ka iibi macaamiisha qalab mashiinno baraf u qalma
Waaxda adeegga iibka kadib: Waxay mas'uul ka tahay rakibidda, dayactirka mashiinnada barafka la soo iibsaday, iyo adeegga khadka tooska ah ee dhammaan arrimaha ku saabsan mashiinnada samaynta barafka.
Horudhaca awooda wax soo saar ee shirkada
Hordhaca qalabka iyo tikniyoolajiyadda
Shirkada Herbin waxay leedahay 3 lathes oo yaryar oo jiifa, 2 latashi oo waaweyn oo toosan, hal mashiinka alxanka tooska ah oo buuxa, 15 mashiinada alxanka gacanta, 3 saxanka goynta & foorarsiga, hal xarun oo lagu maydho aashitada, hal barkad Nickel & chrome plating, hal tunnel daaweynta kuleylka, hal polyurethane (PU) mashiinka buuxinta .........
Musqulaha iyo shaqaalaha khibrada leh waxay u dammaanad qaadayaan uumi bixiyeyaasha barafka wareega wareega ugu fiican.
Daaweynta kuleylka xirfadleyda ah waxay damaanad qaadeysaa uumi baxayaasha barafka jilicsan wax cillad ah kuma lahan isticmaalka muddada dheer ka dib. Maydhista aashitada saxda ah iyo nikkel & chrome plating waxay u oggolaaneysaa uumi bixiyeyaashu inay si deggan u shaqeeyaan in ka badan 20 sano.
Waxaan haynaa in ka badan 50 qof oo si xirfad leh ula shaqeynaya qalab aan kor ku soo xusnay, waxaanna sameyn karnaa in ka badan 5-20 nooc oo uumi bixiyeyaal baraf dabacsan ah maalin kasta.
Waxaan haynaa 2 injineero oo ah awood yar oo adeegsi mashiinada barafka flake, 2 injineer ee mashiinada barafka weyn ee awooda, 3 injineerada mashiinada barafka tuubada iyo mashiinada kale ee barafka oo leh tikniyoolajiyad sare.
Celcelis ahaan, toddobaad kasta, waxaan soo diri doonnaa 200 nooc oo ah mashiinno baraf jilicsan oo adeegsada awood yar. 5-10 nooc oo mashiinno baraf flake ah oo ka weyn 5T / maalin. 3-5 nooc oo mashiinada barafka tuubada ka weyn 3T / maalin.
Herbin wuxuu dhisey xiriir adag oo lala yeesho alaab-qeybiyeyaasha, sida Bitzer, Frascold, Refcomp, Danfoss, Copeland, Emerson, O&F, Eden, iyo wixii la mid ah.
Mashiinnada barafka ee Herbin ayaa si ballaaran looga isticmaalaa adduunka oo dhan.
Tusaale ahaan, 95% mashiinnada barafka ee Made-in-Turkey waxaa lagu qalabeeyaa Herbin flake uumi bixiyeyaasha shirkadaha maxalliga ah ee Sogutma.
65% Mashiinnada barafka ee lagu sameeyo Shiinaha waa kuwo qalabeysan wtih Herbin flake uumiyeyaasha barafka.
30% mashiinada barafka tuubada tikniyoolajiyadda sare ee Bariga Aasiya waxay ka yimaadeen Herbin Ice Systems, sida Filibiin, Indooniisiya, Maleesiya, Fiitnaam, Kamboodiya, Laos .....
Tuubooyinka barafka ayaa cunno ahaan loogu cunaa nolol maalmeedka dalalkaas.
80% doomaha kalluumeysiga Shiinaha waxaa ku qalabeysan mashiinno baraf ah oo loo yaqaan 'Herbin sea flakes'.
Herbin waa shirkadda ugu weyn ee mashiinnada barafka jaban siisa Carrefour, Wal-Mart, Tesco, Jiajiayue, iyo dukaamada kale ee Chain. Jajabka barafka waxaa loo isticmaalaa iibinta cuntada badda, kalluunka, kullanka iyo wixii la mid ah.
Herbin mashiinka barafka weyn ee flake iyo mashiinada barafka tuubada waxaa si weyn u isticmaala Sanquan Foods, Shineway Group, iyo dhir kale oo ka baaraandegta cuntada.
Shirkadda Herbin waxay wakiilo iyo xafiisyo ku leedahay Bariga Dhexe, Koonfur Afrika, Bariga EU, Waqooyiga EU iyo wixii la mid ah.
Alaabtu waxay u qaybsan tahay alaabtii ugu dambaysay, alaabooyinka gaarka ah iyo alaabada guud.
(1) Wax soosaarkii ugu dambeeyay: Wax soosaarkeena ugu dambeeyay waa mashiinada barafka jajaban ee tamarta badbaadiya Adoo adeegsanaya waxyaabo cusub si aad u sameysid uumi bixiyeyaasha barafka jaban, mashiinadeena barafka dufanka leh waxay isticmaalaan 75KWH oo koronto ah si ay u sameyso 1 tan oo jajab baraf ah (Iyadoo lagu saleynayo 30C aagagga iyo 20C biyaha soo galaya). Mashiinnada kale ee barafka jaban ee Shiinaha waxay cunaan ugu yaraan 105KWH koronto si ay u sameeyaan 1 tan oo kasta oo jajab baraf ah.
Waxaan sidoo kale daadad ku soo saarnay mashiinada barafka nuuca loo yaqaan flake ee iibka ah, waxayna isticmaalaan 65KWH koronto ah si ay u sameeyaan celcelis ahaan 1 tan oo baraf ah.
(2) Badeecado gaar ah: Waxaan qiimo gaar ah ugu heynaa mashiinada barafka tuubada 5T / maalin sanadka 2020. Had iyo jeerna waxaan heysanaa qaabkan oo keyd ah. Waxaan had iyo jeer iibin karnaa mashiinka barafka tuubada 5T / maalin oo leh qiimaha ugu fiican adduunka, waana ku jiraan keydka. Waxaan ubaahanahay kaliya 18 maalmood sameynta mashiinka barafka tuubada 5T / maalin cusub 0.
(3) Wax soosaarka guud: Mashiinnada guud ee mashiinnada jajaban ee ganacsiga ayaa ah awoodo yar yar, waxaanna ku haynaa qadar badan oo ah mashiinno yaryar oo baraf ah. Iyagu waa deggan yihiin oo waxay leeyihiin waqti adeeg aad u dheer, waxaa loo iibiyaa sida ey-kulul maalin kasta.
2. Tilmaanta guud ee badeecada
Adeegsiga ganacsiga mashiinnada barafka ee jilicsan ee awoodda yar ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa dukaamada waaweyn, makhaayada, si loogu ilaaliyo cuntada cusub.
Mashiinnada waaweyn ee barafka / mashiinnada barafka tuubbada ayaa caadi ahaan loo isticmaalaa dhirta wax soo saarka cuntada. Barafkana si toos ah ayaa loogu daraa cuntada inta lagu gudajiro ka shaqaynta kulanka.
Mashiinnada waaweyn ee barafka leh iyo mashiinnada barafka tuubbada sidoo kale waxaa loogu talagalay ganacsiga barafka lagu iibiyo. Dhirta barafka waxay ka iibiyaan barafka jajaban dadka kalluumeysiga, ama waxay ka iibiyaan tuubooyinka barafka ku jira bunka / baararka / hoteelada / dukaamada cabitaanka qabow / dukaamada iwm.
Mashiinadayada barafka waxaa si weyn loogu isticmaalaa supermarket weyn, ka shaqeynta hilibka, soosaarida cuntada biyaha, gawraca shimbiraha, warshadaha maqaarka, warshadaha kiimikada dheeha, yareynta heerkulka miinada, bio-farmashiyaha, sheybaarada, xarunta caafimaadka, kaluumeysiga badweynta, mashaariicda dhismaha la taaban karo iyo wixii la mid ah .
Iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyad cusub, mashiinnadeena barafka jajaban ayaa 30% ka awood badan badbaadinta mashiinnada kale ee shiilan ee Shiinaha. Haddii isticmaaluhu doorto mashiinkeyga barafka ee 20T / maalin, wuxuu ku qarashgareyn doonaa 600,000 oo doolar wax ka yar biilka korantada muddo 20 sano ah. Hadduu doorto mishiin kale oo shiinays ah oo shiinays ah, wuxuu ku bixin doonaa 600,000 oo doolar oo dheeraad ah biilka korantada waxbana ma helayo. Tayo isku mid ah oo baraf ah, iyo isla qaddar baraf ah.
Mashiinadayada barafka tuubada waxaa lagu soo saaray iyadoo lagu saleynayo nidaamka barafka tuubada ee Vogt. Waxay leeyihiin xakamaynta heerka dareeraha ee qiiqa uumiyaha, helitaanka dareeraha caqliga badan, wareegga saliida oo siman, nidaamka sifeynta waxtarka leh, iyo qaboojiye dareere ah oo ku soo laabanaya kombaresarada .........
Dhammaan shaqooyinkaas faahfaahsan si wanaagsan ayaa loo qabtay oo waxaad ka heli doontaa mashiinnada barafka tuubbada ee ugu fiican Herbin Ice Systems.
Waxaan haynaa mashiinno baraf wata oo leh heerka Shiinaha, heerka EU, heerka USA .....
Mashiinnada barafka ee leh heerka EU iyo USA, midabada siliggu waa inay raacaan xeerarka CE, dareeraha dareeraha waxaa lagu qalabeeyaa waalka amniga iyo walxaha wuxuu leeyahay 2 dhammaad, dhammaan maraakiibta cadaadiska waxay leeyihiin shahaadada PED .........
Si loo dammaanad qaado waqtiga dheer ee mashiinnada, waxaan had iyo jeer u soo jeedineynaa macaamiisha inay iibsadaan qalabka dayactirka oo ay la socdaan mashiinnada. Bambooyin / matoorro / dareemayaal / xiriiriyayaal / gudbiyeyaal ayaa lagu heli karaa qiimayaal aad u wanaagsan, oo la mid ah inta aan siino alaab-qeybiyeyaashayada.
Waxaan ku xirxiraa mashiinnada barafka sanaadiiqda alwaaxda caadiga ah, kuwaas oo ka sameysan baaluqyo fumigated. Waa laga aqbali karaa dhammaan waddamada adduunka.
Mashiinnada ayaa si fiican loogu adkeyn doonaa sanduuqyada alwaaxda, ama weelasha. Waxaan si taxaddar leh u qaban doonnaa dhammaan shaqooyinka lagama maarmaanka u ah si looga hortago waxyeelada ay keento gariirku, oo ku qulqulaya wadada ka baxda warshadayda ilaa xarunta macaamiisha.
Mashiinka biraha waa la xoojiyay tuubooyinkuna waa la adkeeyay. Shirkadaha kale ee Shiinaha waligood tan tixgelin ma siin.
Macaamiisha waa inay sawirro ka qaadaan si ay u muujiyaan astaamaha cadaadiska markii ugu horreysay ka dib markay helaan mashiinnada barafka. Haddii mashiinadu ay leeyihiin tuubbo dillaac, dildilaac, dhibaatooyin soo daaya gaaska, waxaan bixin doonnaa khasaarahooda.